သစ္စာအလင်း: January 2012
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ကျွန်မ ဟာ မူလ ကလုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ မြန်မာအော်ဂဲနစ်အဖွဲ့ နှင့်အတူ အချိန်ရသလောက်သင်တန်းများပေးဘို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်..။မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သုံးလသာ နေထိုင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၂ နှစ်ဦးပိုင်းမှာ ပြန်လာမယ် လို့လည်းစကားဆိုခဲ့ပါတယ်..။
တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်လို့ မပြန်ဖြစ်တော့ပဲ ဆက်လက် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ အသံကောင်း မဟစ် လိုသော် လည်း အကြောင်းကြောင်းများအကြောင်းဖွဲ့ ညီညွတ်တဲ့အခါ ကျွန်မ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဖြစ်တဲ့အခြေ အနေနဲ့ ရပ်တည်နေထိုင် ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်..။
ရာထူးတွေ..ဂုဏ်ထူးတွေ ဘွဲ့ထူးတွေ…ဥစ္စာဓန ၊ ပကာသန ပေတံများ နဲ့ တိုင်းထွာ တွက်ချက်ပြီး ခင်မင် ဆက်ဆံကြတဲ့ အနှစ်ကင်းသော…. အရသာကင်းမဲ့ သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး များသည် နှလုံးသားကို ထုံပေပေ ဖြစ်စေတတ် တာ..။ လှိုက်လှဲ စစ်မှန်သော မေတ္တာ..စေတနာ ကတော့ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ခံစားဘူးသူတိုင်းသိကြ မှာပါလေ။
ဒီလိုနဲ့ ပဲတောနယ် ကျေးလက် တွေဟာ ….သစ္စာပတ်ဝန်းကျင် …မေတ္တာပတ်ဝန်းကျင် အဖြစ် ဘဝထဲမှာ ရှင်သန် စိမ်းလန်း ရပါတော့တယ်။
ဂန့်ဂေါ ကိုတော့မလာခင်ကတည်းကကြို တင် ပြင်ဆင် ချိန်ရရှိစေဘို့ ဘာတွေသင်ယူချင်ပါသလဲ ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ လုပ်နည်း၊ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်နည်း၊Organic Technology, Good Agriculture Practices သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းစံနစ်တွေ အပြင် ရေဆိုးသန့်စင်နည်း ၊ သီးနှံများကြာရှည်ခံအောင်ယိုထိုးနည်း ၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မှိုစိုက်ပျိုးနည်းများ ကိုပါ သင်ပေးနိုင်အောင် ကျွန်မ FAO Library ကိုပြေးလွှား ကူးယူစီစဉ် ခဲ့ပါတယ်။
အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး မှာ အဓိက မောင်းနှင်ရမှာက အဏုဇီဝပိုးများဖြစ်တာမို့ အကြမ်းစား အဏုဇီဝ ဓာတ်ခွဲခန်း လေး Microbiology Lab လေး နဲ့ မွေးမြူတတ်အောင် ၊ ရတဲ့ ဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ဒေသပိုး(Indigenous Microorganism) တွေမွေးတတ်အောင် အသုံးပြုတတ်အောင် စီမံရပါတော့တယ်။
ဂန့်ဂေါ ဒေသမှာ စားသုံးတဲ့ မုံညင်းချဉ် သည် Lactobacillus Bacteria ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကိုရီးယား ဂင်ချီ နဲ့ဆက်စပ်ပြရပါတယ်။ လှော်စာ၊ ဒိန်ချဉ် ၊ငါးချဉ် ၊ ချဉ်ဖတ်၊ခေါင်ရည် ဆိုတာတွေက ရပ်ထဲရွာထဲက Biotechnology ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လည်း ငယ်ပေါင်း ကိုပြန်တွေ့သလို တရင်းတနှီး ခံစား ရပြန်တာပဲပေါ့။
အဏုဇီဝပိုးများထဲမှ ဘက်တီးရီးယား တို့ ဆိုတာကလည်းပကတိမျက်လုံး နဲ့မြင်ရတာမျိုး မဟုတ်လေတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရလေအောင် ပုံများ အထောက်အထားပြည့်စုံအောင် စုဆောင်းခဲ့ရပါတယ်..။(နောက်တစ်ခါတော့ Microscopeသယ်ရမှာပေါ့လေ)
DNA, RNA,GMO,EM IMO စတာတွေကိုတော့ ဘာသာမပြန်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာလုံး တိုက်ရိုက် နဲ့ရှင်းပြရင်း မိတ်ဆွေတွေလို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မသီအိုရီသင်ပြီးတိုင်း လက်တွေ့ အဏုဇီဝ ပိုးများမွေးမြု ခြင်းကို သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁) ဆင်းပြီးကတည်းက ကျွန်မ နှင့် လိုက်ပါခဲ့သူ ဓာတ်ခွဲမှူးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာမ ဒေါ်ကြူကြူသင်းက သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ မှာလည်း သင်တန်းသားအားလုံး တလေးတစားသင်ယူကြပြီး တက်တက်ကြွကြွ ရှိကြ ပါတယ်။
ကျောက်တုံးညိုညိုလေးများ ခြံရံထားတဲ့ မြစ်သာမြစ်ရဲ့ကမ်းပါးယံ တစ်ခု အထက်ဆီမှာတော့ ဂန့်ဂေါမြို့ အတွက် သဘာဝ ရဲ့လက်ဆောင်မွန်တစ်ခုကို ထပ်မံတွေ့ရှိရပါသေးတယ်..။ အဲဒါကတော့မြေသားကမ်းပါးယံထက်ဆီက စဉ်ဆက်မပြတ် ဒလဟော စီးဆင်းနေတဲ့ သန့်သန့်စင်စင် ရေစီးကြောင်း ရေထွက် တစ်ခုရှိနေတာကို တွေ့လိုက် ရ ပါတယ်။
ရောက်ပြီး နှစ်ရက်မြောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ ရေချိုးတာမတွေ့တော့ အိမ်ရှင်တွေ ..ကအဖြေထုတ်ကြရင်း ချမ်းလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ အမ များက စီမံပို့ဆောင်ပေးကြတာပါ။ ဆောင်းမှာ နွေးပြီး၊ နွေမှာ အေးတယ်ဆိုပဲ။
အမှန်တကယ်လည်းနွေးထွေးလှပါတယ်..။ အများတကာ နှင့် စုပေါင်းသုံးစွဲရတဲ့ ရေချိုးဆိပ်ကလေးတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်..။ သဘာဝ ရေပန်း လို ကမ်းပါးယံထက်မှ ဖေါက်ထွက်လျက် စဉ်ဆက်မပြတ်စီးကျနေပြီး သစ်သား ကွက်ပျစ်လေးတည်ဆောက်ပြီး ရေချိုး အဝတ်လျှော်တဲ့နေရာလုပ်ထားပါတယ်..။အားလုံးသုံးစွဲ ပြီးတဲ့ရေ တွေကတော့ သစ်သားကြမ်းပြင်မှ တဆင့် မြစ်သာမြစ်ထဲကို စီးဆင်းဝင် ရောက်ရရှာပါတယ်။ ဆပ်ပြာ ခေါင်းလျှော်ရည်တို့ဖြင့်မညစ်နွမ်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းရပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်း စာသင်ချိန်မစတင်ခင်မှာ ပဲ ဘုန်းဘုန်းဦးတိက္ခ ထံမှ တယ်လီဖုန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စသင်ချိန်ပြီး လျှင် ဂန့်ဂေါမြို့ နဲ့ သုံးမိုင်ခန့်အကွာမှာ ရှိတဲ့ အုံးတုံးတောင်တောရ ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဘို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နွေရာသီတုံးက ကလေး များ ၅၀၀ ကျော် တရားစခန်းဝင် ကြ တရားအားထုတ်ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ကြည်နူးဘွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
အုံးတုံးတောင်တောရ သည် အေးမြညိမ်းချမ်းမှု အပြည့်အဝ လွှမ်းခြုံထား ပါတယ်..။
တောရ ဝန်းကျင်မှာ လျှို မြောင် ချောက်ကမ်း များ ဝိုင်းပတ်လျက် လုံဟောချောင်းသည်လည်း ခွေခွေရစ်ရစ် စီးဆင်း လျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်း ပျဉ်းကတိုးအင်ပင်တို့ထက်မှာ ရှဉ့်ငယ်လေးများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင် ကျက်စားနေကြတာ သူတော်ကောင်းနယ်မြေရယ်လို့စိတ်ချလက်ချ ရှိနေဟန်ပါ။
ဘုန်းဘုန်းဦးတိက္ခ ကတော့ ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးကိုပင့်ဖိတ်လျက် ဒီတောရမှာ တရားစခန်း စီစဉ် ချင်ပါသေးတယ်တဲ့..။ လိုင်းတူ ဓာတ်တူဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘယ်လောက် ဝေးဝေး နီးနီးလေးပင်မဟုတ်ပါလော။
သင်တန်းဖိတ်ကြား ထားသော်လည်း အချိန်မရ၍ မသွားရောက်နိုင်ခဲ့သော လုံဟော ရွာ လေးရဲ့ ပျပျဝေးဝေး ရေးရေးမျှင်မျှင် မြင်ကွင်းလေးကို မျှော်ငေး လျက် တောင်းပန်စကားဆိုမိပါတယ်..။ ပို၍ ပို၍ တပည့်တော်မ ၏ စေတနာ စွမ်းအားများ စူးရှ ထက်မြက်ရပါစေသား…အရှင်ဘုရား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:37 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:37 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရဲ့ညနေ ၄နာရီမှာ သီရိမန္တလာ မှ ပုံတောင်ပုံညာ သို့ဖြတ်သန်း၍...
၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ဆုံးရက်များရဲ့ ဆောင်းညနေခင်းများအတူ ဖြူလွလွ အတွေ့အကြုံများစွာ ဟာ ကျွန်မ ရဲ့ ဘဝထဲကို အေးမြနူးညံ့စွာ ချင်းနင်းဝင်ရောက် ခဲ့ပါ တယ်..။
ယောဒေသ ရဲ့ မြို့တော် ဂန့်ဂေါ..ကျော…ဆော ….ပုံတောင် ပုံညာ စတဲ့ နာမည် ဆန်းဆန်းလေး တွေက မရောက်ခင်ကတည်းက ကျွန်မရဲ့စိတ်အစဉ်ကို ဆွဲဆောင် ညှို့ငင် နိုင်စွမ်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။
*မြတ်ဗုဒ္စ္ဒ ၏ အဆုံးအမ ဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းကြပါစို့*….ဆိုတဲ့စာတမ်းလေး ကို စိမ်းညို့နေတဲ့ သစ်တောကြိုးဝိုင်း များနောက်ခံထားလျက် လှမ်းမြင်လိုက်ရပါပြီ…။ အော် ဒါ ဂန့်ဂေါ ….ပေပဲ..။
*ဖျင်ပင်နီချော ရယ်နဲ့ ယောထဘီ* ရယ်လို့ ငယ်ငယ်ကစိတ်ထဲ စွဲမြဲခို ဝင်ဘူးသော ယောဒေသ သို့ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိခဲ့ရ ပါပကောလား။
ဂန့်ဂေါမြို့ ရဲ့ မြင့်မားသောကမ်းပါးထိပ်မှ တဆင့် ကျောက်တုံးမဲနက်နက် လေးများ ပေါ်မှ ညင်ညင်သာသာ ဖြတ်သန်း စီးဆင်း နေသော မြစ်သာမြစ် ကို လှပစွာတွေ့မြင်လိုက်မိ တဲ့အခါမှာတော့….
ဘဝ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုခု ကို ဆုပ် ကိုင် လိုက်မိသလိုပါ..။ အတတ်ပညာ တို့ဟူသည် ဆည်ရေလိုစုဆောင်း လျက် မြစ်ရေလို စီးဆင်း ရှင်သန်သင့်သည်မဟုတ်ပါလော..။
မြစ်တို့ ထုံးစံ မြောက်မှ တောင်သို့ စီးဆင်းမြဲမြစ်သော်လည်း မြစ်သာမြစ်သည် တောင်မှမြောက်သို့ စီးဆင်း သော ဆန်တက်နိုင်သော ခွန်အား သတ္တိ များသိုမှီးလျက် တည်တည်ညိမိညိမ် လဲလျောင်း နေပါတယ်။
နုံးတင်မြေနု များဖြင့် အိထွေးစိုပြေ နေသောမြစ်သားမြစ်ဝှမ်း သည် ကန်တော့ချွန် သဖွယ် ကလေး မြို့ ဆီသို့ ပြန့်ထွက်ကျယ်ပြောနေပါတယ်။ ပြန့်ပြန့်ပြူပြူး မြေပြင်တစ်ဝှမ်း သည် ယောဒေသ ၏ ဝမ်းစာ စပါး၊ ပဲ ပြောင်း နှမ်း တို့ ထုတ်လုပ်ရာ တည်မှီရာ သဘာဝလက်ဆောင်မွန်တစ်ရပ် လိုစိမ်းလန်းရွှန်းသစ်နေပါတော့တယ်။
မကွေးမြို့ ကမ်းပါးထက် မှာရပ်ကာ ဧရာဝတီမြစ်ထဲက သဲဖွေးဖွေး ကို ကြည့်ချင်စိတ် သည် ဘဝတစ်လျှောက် လုံး ကို အမြဲချုပ်ကိုင် လွှမ်းမိုးနေတတ်ပါတယ် ဆို တဲ့ (တက္ကသိုလ်မြစိမ်း ရဲ့ *တိုင်းမင်းကြီးသမီး*) ဝတ္ထု ထဲက ခင်ရွှေအေး ရဲ့စိတ်ဝိဥာဉ် ကို နည်းနည်းတော့ ခံစားနားလည် လာသလိုတော့ဖြစ်မိပါတယ်..။
မြေထဲပင်လယ်..ထဲသို့ကျွန်းဆွယ်လို ထိုးထွက်နေသောအီတလီနိုင်ငံက သောင်ပြင် လှလှ များစွာ ကို သဲဖွေး ဖွေးတွေ ကျောက်ဆောင်တွေ..ကျောက်စရစ်နုနုလေးတွေ ပေါ်လမ်းလျှောက် ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရ ဘူးသော် လည်း ပတ်ဝန်းကျင်က လွင့်ပျံ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးများက ကွာခြား နေလေရဲ့..။အသက်မဲ့ တယ်ဆို သော် လည်း စကားပြောတတ်တာ အသေအချာ ပဲလို့ ယုံကြည်မိတာပေါ့လေ..။
၂၀၁၀ ကတည်းက စီစဉ်ဖြန့်ဝေခဲ့ဘူးသော ကျွန်မရဲ့ အော်ဂဲနစ် သင်တန်းမှတ်စုစာအုပ်ကလေးကို အတတ်ပ ညာ ငတ်မွတ် သူ… ဒီနေရာ က လူငယ်လေးတစ်ဦး ရဲ့ လက်ထဲ မှာ တွေ့လိုက် ရ တာကတော့ စူးနစ် နက်ရှိုင်းစွာ ထိရှခံစားရ တာမို့ သရုပ် မခွဲတတ်ခဲ့ပါ ။
အထပ်ထပ် ဖတ်ထား လို့ နွမ်းကျေနေခြင်းဟာ အသိပညာ အဖန်ဖန်ပေးအပ် ပြီးဖြစ် ကြောင်းပြဆိုနေတာ မှန်ပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခံစားမှုပုံရိပ် များကတော့ စာအုပ်လေးလို နွမ်းနွမ်းကျေကျေ ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်..။ မြန်မာပြည် မှာ ထိုကဲ့သို့ သော…*ဒီနေရာ*ပေါင်းများစွာ ..များစွာ ရှိနေကျန်နေ နိုင်သည် မဟုတ်ပါလား..။
ဒီနေရာ မှ ဒီလို လူငယ်လေးပေါင်းများစွာ ရှိနေတာ.အတတ်ပညာရဘို့အတွက် ..ကြိုးစားကြတာ.ကုသိုလ်ရေး ဖြင့် ရှင်သန်နေကြတာ တက်ကြွကြတာ ..မြစ်သာမြစ်လို စီးဆင်းနေတာ တစ်သွင်သွင်….။
ညင်ညင်သာသာ အေးအေးမြမြ….တောက်ပ မှုလည်းရှိကြပါတယ်။
မိသားစုတိုင်းရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝ မှ ဝန်တာ မကြီးမားလှသော အလှူကို လှူဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းစေ့ဆော်ပေး တယ်…။ လူတိုင်း ပါဝင်စေနိုင်အောင်လည်း စည်းရုံး နိုင်ခဲ့တယ်…။ ကုသိုလ် ရဲ့ သီအိုရီ ကို သဘောပေါက်စေ ခဲ့ပါတယ်… ။
စိတ်အလှည့်လေးတစ်ခု ပြီးမြောက်စေပြီး ကုသိုလ်ရှင်တွေ ဖြစ်ကြစေဘို့ နှိုးဆော်ပေးတယ်..။
လူတိုင်း ထမင်းနေ့စဉ် ချက်ကြတာပါ..။ ထို အထဲမှ တစ်ဇွန်းဆန် တစ်ဆုပ်ဆန်ကို နှုတ်ယူလိုက်တာ ပြောပလောက်အောင် ယုတ်လျော့သွားတာမဟုတ်..။ နေ့စဉ်အာရုံထား ရတာ မို့ အာစိဏကံ ကုသိုလ် ဖြစ်နေစေတာလည်းအမှန်ပါ..။
ဒီ စိတ်စေတနာဇောအဟုန်မှတဆင့် *ပုညဟိတေသီ ဆွမ်းလောင်းအသင်း* ဆိုတာ ဂန့်ဂေါမြို့ ရဲ့ ကုသိုလ်မြစ် တစ်စင်း သဖွယ် မြစ်သာမြစ်နှင့် အပြိုင် အိမ်ပေါက်စေ့ကို စီးဆင်းအေးမြစေပါတော့တယ်..။
ပုညဟိတေသီဆွမ်းလောင်းအသင်း ကိုစတင်ဦးဆောင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သူကတော့ ယခု မင်နီဆိုတာ (သီတဂူဝိဟာရ) မှာသီတင်းသုံး တဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဦးတိက္ခဥာဏာ လင်္ကာရ (ယောအသင်း)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်း ကတော့သူ မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးပေး ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ပဒေသာပင်လေးကို အဝေးကနေပြီး မေတ္တာ နှင့်စောင့်ရှောက် ပေးနေဆဲပါ။
ထိုမေတ္တာများကြောင့်ပဲ ကျွန်မအားညှိနှိုင်း ခဲ့တာမို့ ကျွန်မသည်လည်း ပုညဟိတေသီအသင်း နှင့် အတူကုသိုလ်ပြုခွင့်ရရှိခဲ့တာ ဘဝရဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုလိုပါ..။
*ကမ္ဘာကိုပေါင်မုန့်ဝဝ ကျွေးလိုက် တာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါပဲ* လို့ ကျွန်မတို့ ရဲ့အစိမ်းရောင်တော်လှန်ရေးဖခင် Dr. N.E. Borlaug ကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ဆန်ရေစပါးပဲပြောင်းနှမ်းဝါ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သော အတတ်ပညာ ပေးအပ်ခြင်းသည်လည်း ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာသာ သနာ အတွက် ထာဝရ ဆွမ်းကွမ်း အဟာရပေါများအောင် ပဒေသာပင် များစွာ လှူဒါန်းလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါလို့ လို့ မြန်မာဖြစ်တဲ့ကျွန်မ ဆိုချင်ပါသေးတယ်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:24 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်